Onye na-eme ihe nkiri French nke gbara ọsọ, Pari Mutuel Urbain dị iche iche nke ọrụ ya kemgbe mepere ahịa egwuregwu ịntanetị 2010. PMU.fr na-enye ndị ọrụ ohere itinye uche na ahịhịa ugbu a ma na-egwu poker ma ọ bụ nzọ na egwuregwu.
Ọ bụrụ na ị masịrị ịkụ nzọ egwuregwu, ọhụrụ PMU Sport na-enye onye ọ bụla ahịa ego nke 100 euro. Site na ịdenye aha na http://paris-sportifs.pmu.fr/, ịgba nzọ gị mbụ ga-alaghachi ma ọ bụrụ na furu efu, na njedebe nke 100 euro.
Ntị, agbanyeghị, ọ gaghị ekwe omume ịnakọta nkwalite egwuregwu egwuregwu PMU na ego nke 100 euro na PMU poker bonus nke 25 Euro nyere n’enweghi nkwụnye ego gị họrọ ugbu a dabere n’ọrụ gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji ego PMU Sport kwụrụ ụgwọ, a na-ahọrọ nhọrọ site na itinye koodu "SPORT" mgbe ịmepe akaụntụ gị.
Kedu ka PMU a si enye ọrụ? 2020?
Mgbe ịmepe akaụntụ, Egwuregwu PMU ga-akwụghachi gị ụgwọ 100% nke nzọ mbụ gị ma ọ bụrụ na ida ruo njedebe nke 100 €.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ọ tụfuru nzọ nke mbụ si 20 €, saịtị ahụ na-akwụ gị ụgwọ 20 € na akaụntụ player gị. Mgbe mfuchara nzọ nke mbụ si 100 € ma ọ bụ karịa, ị gbakee 100 €.
Site na 22 na 31 Jenụwarị 2020, ejiri ezigbo ego mee ka onye ahụ nọchie anya ya ka i nwee ike relays Ebe e si nweta egwuregwu ahụ ma ọ bụ hichapụ ya kpamkpam site na mbufe akụ. Nke a bụ oge izizi nke PMU chụrụ onyinye ego maka ọbịbịa ya n'ahịa ịkụ nzọ egwuregwu.!
Ihe nputa n’uzo di elu na ntinye aka nke 1st nke 50 € :
Debanye aha maka PMU site na ịpị njikọ a.
Tinye koodu ahụ na etiti SPORT "A nabata m. »
50 € na nkwụnye ego nke onye ọkpụkpọ akaụntụ gị na kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ.
Ma ị kpebiri ịgba nzọ 50 € na eserese n'etiti France na Peru (Rang 4).
Ọ bụrụ n’imeri, ị nweghị ikike nkwụghachi, mana imeri 50 x 4 = 200 €!
Ọ bụrụ na ida, ị ga-enweta 25% nke gi 50 € (ebe 12,50 €) n'ime 10 ụbọchị.
Akaụntụ gị tozuru oke ọkpụkpọ na ịnata 75% (37.50 €) n'ime 10 ụbọchị hapụrụ.
otu esi eji ego PMU egwuregwu nke ọma ?
Mgbe ị nwetachara onye nnọchi ma ọ bụrụ na mbu gị funahụrụ gị, Mụrụ anya. You ga-edochi ego mkpuchi zuru ezu otu oge tupu ahapụ ya.
Ọzọkwa ego na-arụ ọrụ dị ka FreeBets, ya bu naani ezigbo ihe nzoghari nha nke edobere na ugwo n’enwepu ego ngbasa ozi egwuregwu PMU gi.
Na ego a kwụrụ, mana inwere ike igba nzo 100 euro ma ọ bụ ekewa ya na ọtụtụ nzo (ọmụmaatụ 10 paris 10 euro) rue mgbe ị ga-eweghachi ego zuru ezu ịkwụghachi. Nke a bụ ikpe na nyiwe ndị ọzọ dị ka BetStars bonus egwuregwu dịka ọmụmaatụ.
Nkwalite ịkụ nzọ egwuregwu PMU na-enye gị ohere ịnwa ịkpata ego na-egbochi ihe egwu. Onyinye PMU adighi agbanwe agbanwe karie ka ego ParionsSport na-akwụ
na-aguta 150 euro. Agbanyeghị ego PMU ka bụrụ ihe mara mma dịka ihe ọzọ n'ihi ego ha meriri ga-egwuri otu oge maka ndọrọ ego.
Kpachara anya mgbe ị na-edebanye aha maka http://paris-sportifs.pmu.fr/ ịbanye nkọwa kọntaktị gị ma weta dọkụmentị ka akaụntụ gị wee zie ezi na 30 ụbọchị. Nzọụkwụ a dị mkpa maka nkwụghachi.
otu esi eme nkwụnye na withdrawals na PMU ?
Iji mee ka ịkụ nzọ gị na PMU.fr, mbụ ị ga-achọ itinye ego. Maka nke ahụ, PMU na-enye usoro ugwo. Yabụ, ọ bụrụ na ịnweghị kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ ịchọghị iji ịntanetị, ụzọ ndị ọzọ dị.
Maka faịlụ PMU.fr, họrọ si usoro nkwụnye ego ndị a:
Fọrọ nke nta kaadị akwụmụgwọ niile: Visa, MasterCard, Electron…
Paysafecard: dị na ngalaba ụtaba, N'ezie, ụzọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ịchọghị ma ọ bụ gosipụta amamihe nke ọrụ gị
Billets adịchaghị: ime ihe na paysafecard
Nyefe akụ (nwere usoro ngwụcha nke 3 na 4 ụbọchị)
Maka ego ndọrọ ego, Nanị ihe enyere ikike bụ mbufe ụlọ akụ. Iwu French chọrọ ya, yabụ nwekwaara ya na ikike onye na-ahụ maka egwuregwu n'ịntanetị.. Can nwere ike inweta mmeri nnwere onwe site na nke 15 euro.
Ego PMU maka igwu egwuregwu, gaa na http://paris-sportifs.pmu.fr/
Allchọta egwuregwu egwuregwu ịkụ nzọ egwuregwu niile na-enye ma tulee, gaa na peeji ịkụ nzọ egwuregwu efu. Will ga - ahụ n’ime ibe ego ndị a, nke n’egosi ParionsSport na onyinye niile n’ahịa French.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ego maka poker, lelee poker Holdem nke anyị na-ere n'efu